အနုပညာလောက Archives - POPPIN NEW
ဒီကနေ့ အသက် (၃၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသားချော နေတိုး
ဒီနေ့ကတော့ ကလေးလေးတွေကစလို့ လူကြီးတွေအထိ ပရိသတ်တိုင်းက ချစ်ရတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသားချော ကိုနေတိုးရဲ့ အသက် ( ၃၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ နော် အကိုရေ .. ပရိသတ်တွေအကြိုက် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုလည်း ဖန်တီးသရုပ်ဖော်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် 💓💓💓💓ပရိသတ်ကြီးကလည်း မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေး တောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်။ Credit – 📸📷နေတိုး ………………………… unicode …
မြမြ ဇာတ်ကားအတွက် မုဒိမ်းမှုတရားခံသရုပ်ဆောင်(၃)ဦး ရွေးချယ်လိုက်ပြီ
မြမြ ဇာတ်ကားအတွက် မုဒိမ်းမှုတရားခံသရုပ်ဆောင်(၃)ဦး ရွေးချယ်လိုက်ပြီ မြမြ ဇာတ်ကားအတွက် မုဒိမ်းမှုတရားခံသရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲမှ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရတဲ့ သရုပ်ဆောင်သုံးဦးမှာ_ အမှတ်စဉ်…. ၇. လင်းနေ၊ အမှတ်စဉ် ၈၀ . ကိုစိုင်း၊ ၁၂၈. မျိုးလှိုင်ဝင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်​တာညိုမင်းလွင်​ပုံ​ဖော်​ရိုက်ကူးမယ့်​” မြမြ”ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားကြီးမှာ မြမြအဖြစ်​သရုပ်​​ဆောင်​သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​က သရုပ်​​ဆောင်​သွားမှာဖြစ်​ပါတယ်။ အဆိုပါ “မြမြ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင် …
ပရိသတ်တွေ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့ Myanmar Idol ပြိုင်ပွဲကြီးက ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Idol သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကြီးက အခုဆိုရင် Season4ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်း တဖွဲဖွဲ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်၊ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံရဦးမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင် ချောချောလေး Brown @ …